Get a Best 64-bit Video Ntụgharị Windows (Windows 8 gụnyere)
> Resource> Video> Get a Best 64-bit Video Ntụgharị maka Windows
Achọ a 64-bit video Ntụgharị maka Windows? Na ị bụ nri ebe a! Isiokwu a ga-agwa gị a kasị mma 64 bit video Ntụgharị maka Windows (Windows 10 gụnyere). Biko gụọ n'okpuru iji nweta nkọwa ndị ọzọ.
Wondershare Video Converter Ultimate Bụ nke ọma dakọtara na ma 32 bit na 64 bit maka Windows. Ọ atọghata video ka 158 formats, gụnyere QuickTime MOV, MKV, MP4, AVI, na ihe ọ bụla na-ewu ewu formats. Ọzọkwa ọ na-akwado ogbe nchigharị, na-atọghata 30x ngwa ngwa karịa niile nke converters na ahịa. E wezụga na, dị ka a mbido, ị ga-n'anya na ya mfe iji software interface. Wondershare Video Converter Ultimate Bụ kpam kpam a kasị mma 64 bit video Ntụgharị maka Windows.
Dị nnọọ free download na software, na-amụta otú iji ya na 3 nzọụkwụ. Dum akakabarede usoro bụ nnọọ mfe ma dị mfe.
1 Import video n'ime nke a 64 bit video Ntụgharị
Ị nwere ike ozugbo ịdọrọ na dobe gị video n'ime Ntụgharị, ma ọ bụ pịa "Tinye Files" button bulite video na kọmputa gị. Biko mara na software akwado ogbe akakabarede, otú i nwere ike mbubata ihe karịrị 1 video n'ime ya.
2 Set mmepụta video format
Biko pịa na ala akụ button n'okpuru "mmepụta Format" n'elu nri nke software interface. Pịa "usoro" taabụ iji họrọ usoro ị chọrọ iji tọghata. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ị dị nnọọ chọrọ iji tọghata video ngwaọrụ gị maka playback na ị na-amaghị ihe formats na-akwado ngwaọrụ gị, biko dị nnọọ pịa "Ngwaọrụ" taabụ ịhọrọ site na.
Biko mara na a 64 bit video Ntụgharị maka Windows na-akwado edezi videos tupu akakabarede. Mgbe importing videos n'ime ya, biko pịa "Dezie" bọtịnụ hazie gị video. Dị nnọọ pịa taabụ, Kpaa, akuku, Mmetụta, Ndepụta Okwu, Watermark, n'elu menu nke video edezi window zuru okè gị video. Mgbe ahụ biko pịa "OK" iji zọpụta ya.
3 Malite iji tọghata na 64 bit video Ntụgharị
Biko dị nnọọ pịa "tọghata" button na-amalite ntughari mgbe mwube mmepụta usoro. Ị nwere ike pịa "Open nchekwa" ịchọta gị converted videos.
Ọ bụrụ na ị mbubata ọtụtụ videos n'ime software na chọrọ ikpokọta na tọghata ndị na obere vidiyo n'ime otu, dị nnọọ ego igbe nke "jikota niile videos n'ime otu faịlụ" na ala nke software interface.
Ụzọ atọ na Watch Youku Outside China
Olee otú Ikpokọta Videos enweghị Ogo-ọnwụ